Çesme (TURKEY): एजियन सागरको सर्वश्रेष्ठ समुद्र तट | यात्रा समाचार
Çesme (TURKEY): एजियन सागरका सर्वश्रेष्ठ समुद्री तटहरू
मारिएला क्यारिल | | Getaways यूरोप, सामान्य, टर्की
एजियन सागर धेरै सुन्दर समुद्री तट र ठूला पर्यटन स्थलहरु संग भरिएको छ जुन बिभिन्न देशहरुमा वितरण गरिएको छ।
यी समुद्रहरु मध्ये एक त्यो हो Cesme, धेरै लोकप्रिय शहर र स्पा जुन प्रायद्वीपको टुप्पोमा इज्मिरबाट 85 XNUMX किलोमिटर टाढामा टुक्रिन्छ टर्की। यो फोटो हेर्नको लागि पर्याप्त छ कि यात्रा लेख्नको लागि यस लेखलाई मुकुट दिन्छ।
1 Cesme, सुन्दर
2 ईस्मेमा के हेर्ने
3 Beyondesme भन्दा बाहिर के हेर्ने
टर्कीमा नामको अर्थ "स्रोत" हो र यसले यो बनाउँदछ किनकि शहरभरि ओटोम्यान मूल र तातो स्प्रि of्गको पुरानो स्रोतहरू छन्। यो लामो समयदेखि धनी मानिसहरूमा दोस्रो घर भएको स्थान भइसकेको छ, तर केही समयको लागि प्रायद्वीप अन्तर्राष्ट्रिय समुद्रीतट रिसोर्ट बनेको छ।
Hoy यसमा होटलहरू, भाडाका घरहरू, एक मरीना, रेस्टुरेन्टहरू छन् र सबै चीजहरू जुन कुनै पनि आगन्तुकलाई यहाँ केही दिनको लागि छुट दिनको लागि आवश्यक छ। सम्पूर्ण प्रायद्वीप लक्षित शहर हो, आकर्षक शहर बाहिर, किनभने यसको वरिपरिको मनमोहक गाउँहरू, अन्य साना शहरहरू र अन्वेषण गर्न सुन्दर परिदृश्यहरू छन्।
तपाईं त्यहाँ कसरी पुग्न सक्नुहुन्छ? यदि तपाई इज्मिरमा आइपुग्नु भयो भने तपाईले बस लिन सक्नुहुन्छ किनकि त्यहाँ प्रति दिन धेरै सेवाहरू छन् र ती दुबै शहरहरूलाई जोड्ने मार्गमा घुम्छन्। तपाईं पनि आउन सक्नुहुन्छ इस्तानबुलबाट बसमा आठ घण्टाको यात्रा पछि वा यदि तपाईं ग्रीसमा हुनुहुन्छ, चियोस टापुमा, तपाईं सक्नुहुन्छ डु catch्गा समात्नुहोस्। यात्रा एक घण्टा हो।
समावेश त्यहाँ क्रुज मार्गहरू छन् जुन touchesme लाई छुन्छन् जुन जुन र अक्टुबर महिनाको बीचमा, र यसैले यसको आधुनिक क्रूज टर्मिनल छ जुन Çesme Castle बाट समुद्री तटमा करिब २० मिनेट पछि हिड्न सकिन्छ।
भाग्यशाली शहर भित्र एक पैदल को वरिपरि हुन सक्छ। यो एक कॉम्प्याक्ट शहर हो र यसको वरिपरि जान सजिलो छ। सानो नक्शा पर्याप्त छ, महल र भोला पत्ता लगाउनुहोस्, यो नेभिगेट गर्न एकदम सजिलो छ। तपाईं नक्शा टुरिस्ट अफिसमा पाउन सक्नुहुन्छ जुन घाटमा छ, कस्टम घरको छेउमा र महलको अगाडि। :8: .० बाट यसको ढोका खुला छ।
ईस्मेमा के हेर्ने
राम्रो क्याफेहरू, चिया घरहरू र रेस्टुरेन्टहरू मुख्य वर्गको वरिपरि भीड थिए खाने, आराम गर्न र एजियनको महान विचारको साथ शहरको सामाजिक जीवन हेर्न।
El Çesme महल यो XNUMXth औं शताब्दीको सुरुदेखि नै हो र त्यसबेला त्यस इलाकामा विनाशकारी भएका समुद्री डाकूहरूले आक्रमण गर्ने विरूद्ध राम्रो प्रतिरोध गर्न सुल्तान बेजिटले पुनर्निर्माण गरेका थिए।
यो एक भव्य किल्ला हो छ टावर र खांद त्यो यसको चारै पट्टि चारै तिर घुम्दछ। युद्धभूमिबाट शहर र समुद्रको दृश्य महान छ र भाग्यले यो एक धेरै राम्रो संरक्षित भवन हो र यसको हो दुई इतिहास संग्रहालयहरु तिनीहरू धेरै रोचक छन्।
ती मध्ये एउटामा पुरानो शहर एरिथ्राई र अर्कोमा टर्की र रुसी युद्धसँग सम्बन्धित संग्रह छ। तपाईले अगाडि देख्नुहुनेछ को मूर्ति अल्जेरियन गाजी हसन पाशा, ऐतिहासिक घटनाको प्रसिद्ध कमाण्डर जसलाई इस्मेको युद्ध भनिन्छ, र यदि तपाइँ जुलाईमा जानुहुन्छ भने यो शहरले आयोजना गरेको संगीत उत्सवको लागि राम्रो सेट हो।
Cesme इतिहास हो त्यसैले महल थाहा पाउनु पनि समावेश गर्दछ पुरानो सहरमा हिंड्नुहोस् शहरको जसमा XVIII र XIX शताब्दीका अधिक निर्माणहरू छन्, ग्रीक नियोक्लासिकल शैलीको र जुन राम्रोसँग सुरक्षित छ। थप रूपमा त्यहाँ ओटोम्यान भवनहरू छन्, थप विशिष्ट छन्, र कोही यसको सडकबाट शान्तसँग हिंड्न सक्छ।
शहरमा सब भन्दा हालका कामहरू तटमा केन्द्रित छन् किनकि छ वर्ष पहिले नयाँ मरीना, ठूलो, 90 ०-मीटर ब्रेकवाटर र भीडसँग पसलहरू र ठाउँहरू समुद्री किनारमा खाने र पिउने।
शहरको दक्षिणी समुद्री तटहरू हुन् जहाँ तपाईं सनबेट गर्न सक्नुहुनेछ, विन्डसर्फ वा कइटसर्फ पनि। त्यहाँ प्रायद्वीप भर माईलहरू र माईलका सुनौलो बालुवाहरू छन् र त्यहाँबाट छनौट गर्नको लागि धेरै चीजहरू छन्, यद्यपि केहिहरू पहुँचयोग्य छैनन् र आश्चर्यजनक हुन्छन् कि उनीहरूले पहुँचलाई सुधार्ने क्रममा।
केही समुद्री तटहरू धेरै लोकप्रिय छन् र तपाईंले ती हुनको लागि एउटा प्रवेश शुल्क तिर्नु पर्छ, यो समुद्र तटको मामला हो समुद्री किनारा समुद्र तट क्लब, पियाडे कोभमा। के हो पर्छ हेर्न र देखिनलाई
एउटा उत्तम समुद्र तट हो पिरलान्टा समुद्र तट, फैलिएको र सुनहरी, शहरको दक्षिणपश्चिममा, र अर्को हो Altinkum समुद्र तट। यदि तपाईंलाई हल्का पानी मन पर्छ भने यो हो व्हील समुद्र तट, बच्चाहरूको साथ परिवार द्वारा सबैभन्दा धेरै खोजिएको। उही बायुक समुद्र तट, शान्त पानीको साथ, धेरै सफा र तातो स्प्रि ofको निकटतालाई न्यानो धन्यवाद, साथै सेतो बालुवाले सजाइएको र बाँकी जस्तो सुनहरा होइन।
यसले समुद्री किनारलाई धेरै भीड बनाउँदछ, त्यसैले यदि तपाईं उच्च मौसममा जानु भयो भने भीडहरूका लागि तयार हुनुहोस्। बनाउन windsurf तपाई टाढा जानु पर्छ अलाटीयस खेलको अभ्यास गर्नका लागि विश्वका एक उत्तम ठाउँहरू, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाहरूको घर पनि।
Beyondesme भन्दा बाहिर के हेर्ने
सबैकुरा समुद्र तट, सूर्य र आराम होईन। यदि तपाईं ती सक्रिय पर्यटकहरू मध्ये एक हुनुहुन्छ, जो सूर्यमा लामो समयसम्म रहन सक्दैन, तपाईं व्यवस्थित गर्न सक्नुहुन्छ वरिपरि भ्रमण। टर्कीको यस भागमा धेरै रोचक पुरातात्विक साइटहरू छन्।
नजिकै स्पा छ Ilica द्वारा सेतो बालुवा र थर्मल नुहाउने को नरम खाडी संग। लगभग २० किलोमिटर टाढा छ IIdiri, एक साइट यसको पुरातनताको लागि राष्ट्रिय विरासत घोषणा, यसको रैम्पार्ट्स र हेलेनिक अवधिबाट मोजेक फ्लोरहरू अझै चम्किरहेका छन्। र यदि तपाईं सूर्यास्तमा यसको एक्रोपोलिसमा जानुभयो भने, कस्तो दृश्य!
दल्यान Çesme को पूर्वोत्तर एक गहिरो पानी तट मा माछा मार्ने गाउँ हो। तपाईं अनुमान गर्न सक्नुहुनेछ, यो माछा र समुद्री खाना खाने सबैभन्दा उत्तम ठाउँहरू मध्ये एक हो र राती टभर्नहरू उनीहरूको बत्तीहरू खोल्दछन् र तपाईंसँग अति उत्तम समय छ।
योग Fitflik, जहाँ पिरलान्टा प्लाज समुद्र तट र अल्टिनकम समुद्र तट छ, जहाँ तपाईं शिविर बनाउन सक्नुहुन्छ। को गाउँ अलाकाटी यो राम्रो छ, यसको केही पवन चक्कीलाई रेस्टुरेन्टमा परिणत गरियो र यसले धेरै समुद्र तटहरूको पनि स्वामित्व राख्दछ।
उर्ला इस्केलेसी यो प्रायद्वीप मा एक अर्को गन्तव्य र उही हो Gümüldür, Sigacik वा Seferihisar, समुद्र र पुरानो भग्नावशेषका साथ सबै गन्तव्यहरू।
तपाईं बस लिन सक्नुहुन्छ र Izmir भ्रमण गर्नुहोस्उदाहरण को लागी, पुरानो Smyrna, को माध्यम ले हिंड्न पुरातत्व र एथनोग्राफी संग्रहालय, को भग्नावशेष द्वारा रोमन फोरम, महल र सबै कुरा जुन रूस-टर्की युद्धबाट १ 20 २० को दशकमा बचत गरिएको थियो।
तपाईले गर्न सक्ने अर्को भ्रमणमा जानुहोस एफिससलाई चिन्नुहोस्, निस्सन्देह भूमध्यसागरको एक मोती जुन यस क्षेत्रको ग्रीको रोमन भूतकालसँग सम्बन्धित छ। त्यहाँ पुरानो भग्नावशेषहरू पनि छन् Pergamon, बर्गामाको उत्तरमा, र यदि तपाईं अझै जान चाहनुहुन्छ भने, भित्र जानुहोस् र भित्र आउनुहोस् Hierapolis र Pamukkale यसको भग्नावशेष र बरफको झरनाको साथ, झरनाहरू जो वास्तवमा चूनढुंगाले बनेका छन् र ती पहाडबाट बग्ने देखिन्छ। एक कार्यक्रम
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » Getaways यूरोप » टर्की » Çesme (TURKEY): एजियन सागरका सर्वश्रेष्ठ समुद्री तटहरू
१० गालिसियाका सब भन्दा सुन्दर ठाउँहरू
कोस्टा रिकाको क्यारिबियनमा छुट्टी